Dispute Between Japan and South Korea Overshadows G20 Meetings | Myanmar Business Today
Home Business Regional Dispute Between Japan and South Korea Overshadows G20 Meetings
The feud has its roots inadecades-old disagreement over compensation for South Korean labourers forced to work at Japanese firms during World War II. It deepened earlier this year when Tokyo curbed exports of chipmaking materials to South Korea, threatening to disrupt the global tech supply chain.
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ပျက်စီးသွားသော ဖူကူရှီးမား ဓာ‌တ်ပေါင်းဖိုမှ ဓာတ်ရောင်ခြည်များထွက်နေသည်ဟု တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ပြောဆိုချက်အား ပယ်ချရန်အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံသည် ယင်း၏ G20 ဥက္ကဋ္ဌနေရာကို ရယူလိုက်သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံအကြား တင်းမာမှု‌က G20 အစည်းအဝေးများအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနေသည်။
G20 နိုင်ငံများမှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများသည် ဂျပန်နိုင်ငံ Nagoya တွင် နှစ်ရက်ကြာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ယခုအခါတွင် ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့အကြား ထောက်လှမ်းရေးသတင်းအချက်အလက် မျှဝေရေး စာချုပ်မှာလည်း သက်တမ်းကုန်တော့မည်ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်၊ တရုတ်၊ ရုရှားမှ ကိုယ်စားလှယ် ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံ တွင်ပြုလုပ်မည့် အစည်းအဝေး၏ ညစာစားပွဲသို့ တက်ရောက်ကြောင်း သိရှိထားရသော်လည်း တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Kang Kyung-wha အနေဖြင့် အဆိုပါ ညစာစားပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိတော့ မသိရသေးပေ။
အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ မဟာမိတ်များဖြစ်သော ဂျပန်နှင့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံရေးမှာ အငြင်းပွားမှုကြောင့် တင်းမာနေသည်။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ဖူကူယားမား စက်ရုံမှာ ရေဒီယိုသတ္တိကြွ အကြွင်းအကျန်များနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ကြောင်း ပြောဆိုထားသော်လည်း ဂျပန်နိုင်ငံကတော့ အဆိုပါ ပြောဆိုချက်များက ငြင်းချက်ထုတ်ထားသည်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ GSOMIA ထောက်လှမ်းရေးအချက်အလက်မျှဝေရေးစာချုပ်ကို ဖျက်သိမ်းရန် စီစဥ်ထားသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံကတော့ ၎င်းတို့ သုံးနိုင်ငံ လုံ‌ခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့် ယင်းစာချုပ်အား ဆက်လက် ထားရှိရန် ဖိအားပေးနေသည်။
SOURCEJu-min Park (Reuters)
Previous articleAustralia Signs Critical Minerals Research Agreement with U.S.
Next articleOil Slips as Lack Of U.S.-China Trade Talk Progress Frays Investor Nerves